Europe gaa Eshia: Bahrain nwere ọdụ ọdụ ụgbọ mmiri na-efe efe ngwa ngwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Europe gaa Eshia: Bahrain nwere ọdụ ọdụ ụgbọ mmiri na-efe efe ngwa ngwa
Akụkọ Bahrain na -agbasa • Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị!
Alaeze Bahrain ewepụtala ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa mpaghara na mpaghara nwere naanị oge ntụgharị 2hr maka arịa niile-nke pụtara ngwaahịa nwere ike ịnọnyere ndị ahịa n'ime ọkara oge yana na 40% nke ọnụ ahịa ya.
Mwepụta nke "Bahrain Global Sea-Air Hub" na-egosipụta ike na ọnọdụ Bahrain dị n'etiti ahịa Europe na Eshia yana ịdị nso ya na ahịa ebumnuche mpaghara site na iguzobe ọdụ ụgbọ mmiri na-ebugharị ikuku nke nwere ọtụtụ ikuku na mpaghara. iru ụwa.
Oghere a na-adabere na usoro mkpochapụ nke edoziri nke ọma, ngwa ọrụ kachasị mma, na digitization zuru oke iji nweta oge ngwụcha ngwụcha nke naanị ihe dị ka awa abụọ maka ngwongwo na-ebuga n'ọdụ ụgbọ elu mba Bahrain na Khalifa bin Salman Port, na nke ọzọ.
Uru ndị a na -atụgharị ka ọ bụrụ mbelata 50% na nkezi oge atụnyere ibu ụgbọ mmiri dị ọcha yana mbelata 40% ma e jiri ya tụnyere ibu ikuku dị ọcha. N'ihi ya, ọdụ ụgbọ mmiri Bahrain na-arụ ọrụ dị ka ihe bara uru maka ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebugharị ibu, ọkachasị n'ihe gbasara nsogbu mbupu na-aga n'ihu.
Bahrain ga-enye ọkwa Onye Mmekọ na atụmatụ a n'ahịa niile nke ụwa nke ga-enye ohere maka inye ụlọ ọrụ mba ha ohere ka ha bụrụ onye ikike ịtụkwasị obi na ọdụ ụgbọ mmiri nke ọdụ ụgbọ elu ikuku ụwa nke Bahrain.
Minista ụgbọ njem na nkwukọrịta Bahrain, Kamal bin Ahmed kwuru:
“Mwepụta nke ọdụ ụgbọ mmiri Global-to-Air logistics, nke kachasị ọsọ na Middle East, ebe a na Bahrain bụ ezigbo ohere ọ bụghị naanị maka ụlọ ọrụ lọjistik ụwa kamakwa maka ndị na-ebubata ya n'ofe ụwa. Ọrụ a nwere ike ibute ịchekwa 40% ma e jiri ya tụnyere ibu naanị ikuku na 50% oge ndu ngwa ngwa karịa ezigbo ụgbọ mmiri.
Ọ gbakwụnyere, "anyị nwere ike ime nke a naanị maka ọnọdụ pụrụ iche anyị, ịdị nso nke ọdụ ụgbọ mmiri anyị, yana ndị na-achịkwa anyị, ndị na-arụ ọrụ na ndị isi ọdụ ụgbọ mmiri na-arụkọ ọrụ ọnụ yana usoro nhazi dijitalụ ọgbara ọhụrụ."
Ogige a ga -eme ka uto nke ngalaba lọjistik Bahrain ga -enye aka n'ịbawanye ụba akụ na ụba nke Alaeze. GDP GDP na-abụghị mmanụ afọ na-eru 7.8% na Q2 na 2021.
Ọnụ ego ọrụ n'ime mpaghara lọjistik dị 45% dị ala na Bahrain ma e jiri ya tụnyere ahịa ndị agbata obi, dị ka akụkọ KPMG 2019 si kwuo "ọnụ ahịa ime azụmaahịa na ngwa agha". Nke a edobela Bahrain ka ọ bụrụ ebe mara mma maka azụmaahịa ụwa na mpaghara na -arụ ọrụ n'ime mpaghara ahụ.
Banyere Ministry of Transportation and Telecommunications (MTT)
Ministri ụgbọ njem na nkwukọrịta Bahrain (MTT) bụ ụlọ ọrụ gọọmentị na -ahụ maka mmepe na nhazi nke akụrụngwa na usoro nkwukọrịta nke alaeze.
Site na ebumnobi dị mkpa nke ịkwalite ogo ndụ na ime ka mmegharị ndị mmadụ na ngwongwo site na ala, n'oké osimiri, na ụgbọ elu ikuku kwekọrọ na Ọhụụ Ọhụụ 2030, a na -enye MTT ọrụ ịzụlite ụgbọ njem na -aga nke ọma na nke na -adigide na ụlọ ọrụ nkwukọrịta iji kwado Alaeze ahụ. mmụba akụ na ụba.
Otu mmasị WTN ọhụrụ na njem mba ofesi...